म मर्न चाहन्छु—आत्महत्या गर्ने सोचाइ आउँदा के बाइबलले मलाई मदत गर्न सक्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अलुर अल्बेनियन आइरिस साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गा ग्रीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली डच डेनिश ताजिकी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (पश्चिम अफिका) पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मलावी साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल लो जर्मन वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
सक्छ। बाइबल “निराश भएकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुने परमेश्‍वरले” दिनुभएको किताब हो। (२ कोरिन्थी ७:६) हुनत बाइबल मानसिक स्वास्थ्यको किताब होइन तर यसले आत्महत्या गर्ने सोचाइ राखेका थुप्रैलाई मदत गरेको छ। यसमा पाइने व्यावहारिक सल्लाहले तपाईँलाई पनि मदत गर्न सक्छ।
बाइबलले कस्तो व्यावहारिक सल्लाह दिन्छ?
के बाइबलमा मर्न चाहेका व्यक्‍तिहरूबारे बताइएको छ?
आत्महत्या गर्ने सोचाइ त्याग्न तपाईँलाई कुन-कुन बाइबल पदहरूले मदत गर्छ?
साथीले “म मर्न चाहन्छु” भन्यो भने?
मैले विगतमा आत्महत्या गर्ने कोसिस गरेको थिएँ भने?
• आफ्नो भावना व्यक्‍त गर्नुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “साँचो मित्रले सधैँ माया गर्छ अनि ऊ दुःखमा साथ दिन जन्मेको दाजुभाइजस्तै हुन्छ।”—हितोपदेश १७:१७.
अर्थ: पीडादायी सोचाइ आउँदा हामीलाई अरूको साथ चाहिन्छ।
आफ्नो भावना आफैमा सीमित राख्नुभयो भने तपाईँलाई गह्रौँ भारी बोकेको जस्तै महसुस हुनेछ। तर तपाईँले आफ्नो भावना अरूलाई बताउनुभयो भने तपाईँको बोझ कम हुनेछ अनि तपाईँले आफ्नो अवस्थालाई फरक तरिकाले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ।
यसो गरे कसो होला: आजै आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य वा भरोसायोग्य साथीसित कुरा गर्नुहोस्‌। तपाईँ आफ्नो भावना लेखेर पनि व्यक्‍त गर्न सक्नुहुन्छ।
• डाक्टरहरूको मदत लिनुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “निरोगीहरूलाई होइन तर रोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्छ।”—मत्ति ९:१२.
अर्थ: बिरामी हुँदा उपचार गर्नुपर्छ।
आत्महत्या गर्ने सोचाइ मानसिक वा भावनात्मक रोगको लक्षण हुन सक्छ। यो शारीरिक तवरमा हुने बिमारी जस्तै हो त्यसैले हामीले लाज मान्‍नु पर्दैन। मानसिक र भावनात्मक रोग निको पार्न सकिन्छ।
यसो गरे कसो होला: सकेसम्म छिटो दक्ष चिकित्सकसित कुरा गर्नुहोस्‌।
• परमेश्‍वर हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर नबिर्सनुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “के पाँच वटा भँगेरा दुई पैसामा बिक्दैन र? तैपनि तीमध्ये एउटा पनि परमेश्‍वरले बिर्सनुहुन्‍न। . . . नडराओ, तिमीहरू थुप्रै भँगेराभन्दा बहुमूल्य छौ।”—लुका १२:६, ७.
अर्थ: तपाईँ परमेश्‍वरको नजरमा बहुमूल्य हुनुहुन्छ।
कसैलाई मेरो वास्ता छैन जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर तपाईँले भोगिरहनुभएको पीडा परमेश्‍वर देख्नुहुन्छ। तपाईँको बाँच्ने इच्छा नै मरे पनि उहाँ तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ। भजन ५१:१७ यसो भन्छ: “हे परमेश्‍वर, तपाईँ टुटेको र चूर्ण हृदयलाई तिरस्कार गर्नुहुन्‍न।” परमेश्‍वर तपाईँ बाँचेको चाहनुहुन्छ किनभने उहाँ तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ।
यसो गरे कसो होला: परमेश्‍वर तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर देखाउने प्रमाणहरू बाइबलबाट केलाउनुहोस्‌। उदाहरणको लागि, प्रहरीधरहरा २०१९ सङ्‌ख्या ३ हेर्नुहोस्‌।
• परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “तिमीहरूले आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि [परमेश्‍वरमाथि] बिसाओ किनकि उहाँले तिमीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ।”—१ पत्रुस ५:७.
अर्थ: तपाईँले आफ्नो मनको बह र चिन्ता परमेश्‍वरलाई पोखाएको उहाँ चाहनुहुन्छ।
तपाईँले सहन सकोस्‌ भनेर परमेश्‍वरले तपाईँलाई मनोशान्ति र बल दिनुहुन्छ। (फिलिप्पी ४:६, ७, १३) साँचो मनले उहाँलाई पुकार्नेहरूलाई उहाँ मनोशान्ति र बल दिएर मदत गर्नुहुन्छ।—भजन ५५:२२.
यसो गरे कसो होला: परमेश्‍वरलाई आजै प्रार्थना गर्नुहोस्‌। यहोवा नाम पुकारेर प्रार्थना गर्नुहोस्‌ र आफ्नो भावना उहाँलाई बताउनुहोस्‌। (भजन ८३:१८) सहने बल दिनुहोस्‌ भनेर उहाँलाई पुकार्नुहोस्‌।
• बाइबलमा भविष्यबारे पाइने आशामा मनन गर्नुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “यो आशा हाम्रो जीवनको लङ्‌गर हो अनि यो पक्का र अटल छ।”—हिब्रू ६:१९.
अर्थ: आँधीहुरीले पानीजहाजलाई यताउता हुर्ऱ्याएजस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँका भावनाहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्‌ तर बाइबलको आशाले तपाईँलाई भावनाहरू सन्तुलनमा राख्न मदत गर्छ।
यो कुनै निराधार आशा होइन। बरु दुःखकष्ट अन्त गर्ने परमेश्‍वरको प्रतिज्ञामा आधारित छ।—प्रकाश २१:४.
यसो गरे कसो होला: परमेश्‍वरबाट आएको सुसमाचार! पुस्तिकाको पाठ ५ बाट बाइबलले दिने आशाबारे अझ धेरै सिक्नुहोस्‌।
• आफूलाई रमाइलो लाग्ने काम गर्नुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “आनन्दित हृदय रोग निको पार्ने औषधीजस्तै हो।”—हितोपदेश १७:२२.
अर्थ: आफूलाई रमाइलो लाग्ने काम गर्दा हाम्रो मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यमा सुधार आउँछ।
यसो गरे कसो होला: तपाईँलाई रमाइलो लाग्ने कामहरू गर्नुहोस्‌। उदाहरणको लागि, उत्थानदायी सङ्‌गीत सुन्‍नुहोस्‌, प्रोत्साहनदायी लेखहरू पढ्‌नुहोस्‌ वा आफूलाई रुचि लाग्ने कुनै काम गर्नुहोस्‌। अरूलाई मदत गर्नुभयो भने पनि तपाईँ अझै आनन्दित हुन सक्नुहुनेछ, चाहे त्यो मदत सानो नै किन नहोस्‌।—प्रेषित २०:३५.
• आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “शारीरिक तालिमबाट केही फाइदा त हुन्छ।”—१ तिमोथि ४:८.
अर्थ: व्यायाम गर्दा, पर्याप्त मात्रामा सुत्दा अनि स्वस्थकर खानेकुरा खाँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ।
यसो गरे कसो होला: १५ मिनेट भए पनि कतै टहल्नुहोस्‌।
• जीवनमा परिस्थिति सधैँ एउटै भइरहँदैन भन्‍ने कुरा नबिर्सनुहोस्‌।
बाइबल यसो भन्छ: “तिमीहरूको जीवन भोलि के हुने हो, त्यो तिमीहरूलाई थाह छैन।”—याकुब ४:१४.
अर्थ: कहिल्यै समाधान नहुने जस्तो लाग्ने समस्या पनि समाधान हुन सक्छ।
अहिले तपाईँको अवस्था जतिसुकै नराम्रो भए पनि भोलि त्यो परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले आफ्ना समस्याहरूको सामना गर्ने कोसिस गर्नुहोस्‌। (२ कोरिन्थी ४:८) तपाईँको निराशाजनक अवस्था पछि परिवर्तन हुनेछ तर आत्महत्या गर्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो जीवनलाई फेरि फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्‍न।
यसो गरे कसो होला: जीवनमा अति नै निराश भएकोले मर्न पाए नि हुन्थ्यो भनेर महसुस गरेका केही व्यक्‍तिको उदाहरण बाइबलमा पाइन्छ, ती पढ्‌नुहोस्‌। अनि पछि गएर उनीहरूले सोच्दै नसोचेको तरिकामा उनीहरूको परिस्थिति कसरी परिवर्तन भयो, याद गर्नुहोस्‌। केही उदाहरण विचार गरौँ।
छ। बाइबलमा केही यस्ता व्यक्‍तिबारे बताइएको छ, जसले यसो भने, “म मर्न चाहन्छु।” परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई हप्काउनुभएन बरु तिनीहरूलाई मदत गर्नुभयो। उहाँले तपाईँलाई पनि मदत गर्नुहुनेछ।
• तिनी को थिए? एलिया साहसी भविष्यवक्‍ता थिए। तर तिनी एक समय निकै निराश भए। “एलिया हाम्रो जस्तै भावना भएका मानिस थिए” भनी याकुब ५:१७ बताउँछ।
• तिनी किन मर्न चाहे? एक समय तिनी निकै डराए अनि एक्लो महसुस गर्नुका साथै आफूलाई बेकामको सम्झे। त्यसैले तिनले यसरी बिन्ती गरे: “हे यहोवा! . . . मेरो ज्यान लिनुहोस्‌।”—१ राजा १९:४.
• तिनलाई केले मदत गऱ्‍यो? एलियाले आफ्ना भावनाहरू परमेश्‍वरलाई पोखाए। परमेश्‍वरले तिनलाई कसरी प्रोत्साहन दिनुभयो? परमेश्‍वरले एलियाको ख्याल राख्नुभयो र तिनलाई आफू कति शक्‍तिशाली छु भनेर प्रदर्शित गर्नुभयो। तिनी अझै मूल्यवान्‌ छन्‌ भनेर परमेश्‍वरले तिनलाई आश्‍वासन दिनुभयो। उहाँले एलियालाई तिनको हेरचाह गर्ने एक जना सक्षम सहायक दिनुभयो।
▸ एलियाको विषयमा पढ्‌नुहोस्‌: १ राजा १९:२-१८.
• तिनी को थिए? अय्युब एक जना धनी मानिस थिए र तिनको ठूलो परिवार थियो। तिनले वफादार भई साँचो परमेश्‍वरको उपासना गरे।
• तिनी किन मर्न चाहे? अचानक अय्युबको जीवनले ठूलो मोड लियो। तिनीमाथि थुप्रै दुःखकष्ट आइपऱ्‍यो। तिनले आफ्नो सबै सम्पत्ति गुमाउनुपऱ्‍यो। तिनका छोराछोरीहरू प्रकोपमा परेर मरे। अनि तिनी आफै पनि पीडादायी रोगको सिकार हुनुपऱ्‍यो। साथै ती सबै समस्याहरूको कारण तिनी आफै हुन्‌ भनेर तिनलाई झूटो आरोप लगाइयो। त्यसैले अय्युबले यसो भने: “म आफ्नो जीवनदेखि वाक्क भइसकेँ, अब म बाँच्न चाहन्‍नँ।”—अय्युब ७:१६.
• तिनलाई केले मदत गऱ्‍यो? अय्युबले परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गरे र अरूसित पनि कुरा गरे। (अय्युब १०:१-३) तिनको दयालु साथी एलिहुले तिनलाई प्रोत्साहन दिए। एलिहुले अय्युबलाई तिनले भोगिरहेको अवस्थालाई फरक तरिकामा हेर्न मदत गरे। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अय्युबले परमेश्‍वरको सल्लाह र मदत स्विकारे।
▸ अय्युबको विषयमा पढ्‌नुहोस्‌: अय्युब १:१-३, १३-२२; २:७; ३:१-१३; ३६:१-७; ३८:१-३; ४२:१, २, १०-१३.
• तिनी को थिए? मोसा पुरातन इस्राएलका प्रमुख व्यक्‍ति र वफादार भविष्यवक्‍ता थिए।
• तिनी किन मर्न चाहे? मोसाको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थियो तर थुप्रैले तिनीविरुद्ध गनगन गरिरहन्थे। त्यसैले तिनी निराश भए र परमेश्‍वरलाई यसरी पुकारे: “बिन्ती छ, बरु मलाई मार्नुहोस्‌।”—गन्ती ११:११, १५.
• तिनलाई केले मदत गऱ्‍यो? मोसाले आफ्नो भावना परमेश्‍वरलाई बताए। मोसाको तनाव कम गर्न परमेश्‍वरले तिनको कामको बोझ हल्का गरिदिनुभयो।
▸ मोसाको विषयमा पढ्‌नुहोस्‌: गन्ती ११:४-६, १०-१७.
परमेश्‍वर तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर प्रमाण दिने बाइबल पदहरू:
“यहोवा टुटेका हृदय भएकाहरूको नजिक हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ।”—भजन ३४:१८.
“जब चिन्ता र फिक्रीले मलाई छोप्यो, तब तपाईँले मलाई सान्त्वना र दिलासा दिनुभयो।”—भजन ९४:१९.
(भजन २७:१०; १०३:१२-१४; २ कोरिन्थी १:३, ४ पनि हेर्नुहोस्‌।)
परमेश्‍वर तपाईँको पीडा बुझ्नुहुन्छ भनेर प्रमाण दिने बाइबल पदहरू:
“तपाईँले मेरो दुःख देख्नुभएको छ; मेरो वेदना तपाईँलाई थाह छ।”—भजन ३१:७.
“हरेक चोटि तिनीहरू दुःखमा पर्दा उहाँ पनि दुःखी हुनुभयो। . . . प्रेम र करुणा देखाएर . . . उहाँ आफैले तिनीहरूलाई बोकेर हिँड्‌नुभयो।”—यसैया ६३:९.
परमेश्‍वर तपाईँ उहाँको नजिक भएको चाहनुहुन्छ र आफ्नो भावना प्रार्थनामार्फत पोखाएको चाहनुहुन्छ भनेर प्रमाण दिन बाइबल पदहरू:
‘कुनै कुराको विषयमा चिन्तित नहोओ तर हरेक कुरामा प्रार्थनाद्वारा आफ्नो निवेदन परमेश्‍वरसमक्ष जाहेर गर। तब परमेश्‍वरको शान्ति, जुन मानिसको समझभन्दा बाहिरको छ, त्यसले ख्रिष्ट येसुद्वारा तिमीहरूको हृदय र सोच्ने क्षमताको रक्षा गर्नेछ।’—फिलिप्पी ४:६, ७.
“परमेश्‍वरसित नजिक होओ र उहाँ तिमीहरूसित नजिक हुनुहुनेछ।”—याकुब ४:८.
(भजन ३४:४, १५; ५५:२२ पनि हेर्नुहोस्‌।)
परमेश्‍वरले तपाईँलाई बल दिनुहुनेछ भनेर प्रमाण दिने बाइबल पदहरू:
“किनकि जसले मलाई शक्‍ति दिनुहुन्छ, उहाँद्वारै म सबै कुरा गर्ने बल पाउँछु।”—फिलिप्पी ४:१३.
“नडराऊ किनकि म तिमीसित छु; फिक्री नगर किनकि म तिम्रा परमेश्‍वर हुँ। म तिमीलाई बलियो पार्नेछु र तिमीलाई मदत गर्नेछु।”—यसैया ४१:१०.
(भजन १३८:३; यसैया ४०:२९-३१ पनि हेर्नुहोस्‌।)
यदि साथीले तपाईँसित आत्महत्या गर्ने सोचाइबारे कुरा गर्छ भने त्यसलाई हल्कासित नलिनुहोस्‌। साथीले कस्तो महसुस गरिरहेको छ भनेर बुझ्न तिनलाई आफ्नो कुरा राख्न प्रोत्साहन दिनुहोस्‌। (हितोपदेश २०:५) मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने आफ्नो चाहनालाई व्यक्‍त गर्दा तिनीहरूले आत्महत्या गर्ने सम्भावना कम हुन्छ।
समानुभूति देखाउँदै सुन्‍नुहोस्‌। “हरेक मानिस सुन्‍नलाई सधैँ तयार हुनुपर्छ, बोल्न हतार गर्नु हुँदैन।” (याकुब १:१९) मानसिक पीडा वा डिप्रेसनले गर्दा मानिसहरूले सोचविचारै नगरी बोल्न सक्छन्‌ भन्‍ने कुरा मनमा राख्नुहोस्‌। (अय्युब ६:२, ३) त्यसैले साथीले सोचविचारै नगरी बोल्यो भने चित्त नदुखाउनुहोस्‌ अनि त्यसलाई मनमा नलिनुहोस्‌।
सान्त्वनादायी कुरा गर्नुहोस्‌। बाइबलले यस्तो सल्लाह दिन्छ, “जो निराश छन्‌, तिनीहरूसित सान्त्वनादायी कुरा गर।” (१ थिस्सलोनिकी ५:१४) साथीले आफ्नो भावना व्यक्‍त गर्दा त्यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्‌ बरु तिनको कुरा पूरै सुन्‍नुहोस्‌ र त्यसको कदर गर्नुहोस्‌। तपाईँ तिनको ख्याल राख्नुहुन्छ भनेर पनि बताउनुहोस्‌।
साथीलाई मदत माग्न प्रोत्साहन दिनुहोस्‌। “बुद्धिमान्‌ मानिसले सरसल्लाह गर्छ” भनेर हितोपदेश १३:१० बताउँछ। साथीलाई गम्भीर शारीरिक समस्या छ भने तिनलाई डाक्टरको सल्लाह लिन प्रोत्साहन दिनुहोस्‌। आत्महत्या गर्ने भावना आउनु भनेको मानसिक वा भावनात्मक बिमारीको चिन्ह हो। त्यसैले चिकित्सकको सल्लाह लिन साथीलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्‌। तिनीसँगै अस्पताल जाने आफ्नो इच्छा पनि बताउनुहोस्‌।
प्रेम देखाउनुहोस्‌। बाइबल भन्छ, “साँचो मित्रले सधैँ माया गर्छ अनि ऊ दुःखमा साथ दिन जन्मेको दाजुभाइजस्तै हुन्छ।” (हितोपदेश १७:१७) तपाईँ साथीको समस्या र आत्महत्या गर्ने तिनको भावना हटाउन सक्नुहुन्‍न। तर तपाईँ तिनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तिनलाई मदत गर्न चाहनुहुन्छ भनेर विश्‍वस्त पार्न सक्नुहुन्छ। यसले तिनलाई समस्याहरूसँग जुझ्न मदत गर्नुका साथै आशावादी हुन पनि मदत दिनेछ।
तपाईँलाई सायद दोषी भावनाले सताउँछ होला अनि लाज पनि लाग्छ होला। तपाईँले विगतमा आत्महत्या गर्न खोज्नुको कारण वा अहिले तपाईँको मनको पीडा कसैले पनि बुझ्न सक्दैन जस्तो तपाईँलाई लाग्न सक्छ।
अरूले कस्तो महसुस गरिरहेको छ भनेर हामी सबै कुरा बुझ्न सक्दैनौँ भनेर बाइबलमा बताइएको छ। बाइबल यसो भन्छ: “मनको पीडा आफैलाई मात्र थाह हुन्छ।” (हितोपदेश १४:१०; १ राजा ८:३८) त्यसैले माया गर्ने व्यक्‍तिले तपाईँलाई केही हदसम्म सान्त्वना देलान्‌ तर तिनीहरूले तपाईँको सबै कुरा नबुझ्न सक्छन्‌। तैपनि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्‍न भन्‍ने कुरामा ढुक्क हुनुहोस्‌।
परमेश्‍वर मानिसको हृदयमा के छ भनी जान्‍नुहुन्छ। (२ इतिहास ६:३०) तपाईँलाई मर्नुबाहेक अरू कुनै उपाय छैन जस्तो किन लाग्यो भनेर यहोवालाई थाह छ। तपाईँ अहिले कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँलाई थाह छ। सायद तपाईँ लज्जित वा दुःखी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ।—भजन १३९:१.
परमेश्‍वरले जीवनको एकदमै मोल गर्नुहुने भएकोले विगतमा आत्महत्या गर्ने सोचाइ राखेकाहरूलाई क्षमा दिन उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। (भजन ८६:५) आत्महत्या गर्न कोसिस गर्ने धेरैजसो मानिसहरू आफ्नो जीवन खतम गर्न होइन बरु आफ्नो पीडाबाट मुक्‍त हुनको लागि आत्महत्या गर्न खोज्छन्‌ भनेर उहाँ बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले “हाम्रो हृदयले हामीलाई . . . दोषी ठहरायो भने पनि” यहोवा हामीलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ किनभने “परमेश्‍वर हाम्रो हृदयभन्दा महान्‌ हुनुहुन्छ र उहाँलाई सबै कुरा थाह छ।” (१ युहन्‍ना ३:१९, २०) तपाईँको लागि “उहाँ कोमल कृपाका बुबा र सबै सान्त्वनाका परमेश्‍वर” हुन चाहनुहुन्छ।—२ कोरिन्थी १:३.
दुःखकष्ट बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य शान्ति र आनन्द
किन कसैले मृत्युलाई आफ्नो साथी बनाउँछ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने म मर्न चाहन्छु—आत्महत्या गर्ने सोचाइ आउँदा के बाइबलले मलाई मदत गर्न सक्छ?
आत्महत्या गर्ने सोचाइ आएकाहरूलाई बाइबलले कसरी मदत गर्न सक्छ?
ijwbq लेख १५८